Dad xubno lagu tallaalay ka dhaxlay Kansar - BBC News Somali
Dad xubno lagu tallaalay ka dhaxlay Kansar
10 Disembar 2018
Image caption Tom Tyreman wuxuu cudurka kansarka u dhintay bishii Febraayo
Qoyska uu ka soo jeedo nin dhintay ka dib markii lagu tallaalay beer uu ku deeqay qof qabay cudurka Kansarka oo uusan baaritaanka sheegin ayaa codsaday in la sameeyo baaritaanno dheeraad ah markii qalliinkaas lagu dhaqaaqayo.
Tom Tyreman, oo 63 jir ahaa, kana soo jeeday magaalada Stockton ee dalka Ingiriiska, ayaa caafimaaday markii lagu sameeyay qalliinka beerka looga baddalay oo sannad ka hor ka dhacay isbitaalka Freeman ee magaalada Newcastle, hase ahaatee bishii Febraayo ayuu u dhintay cudurka kansarka.
Waxaa goor dambe la ogaaday in beerkii lagu tallaalay ninkan uu ku jiray kansar aad khafiif u ah oo uusan qabanin qalabkii lagu baarayay.
Mas'uuliyiinta isbitaalka ayaa sheegay in natiijadaas musiibada lahayd aysan ahayn mid lasii ogaaday.
'Seygeyga wuu i nacay' - haweeneyda loo deyriyay inay qabto kansar
Ciyaaartoy horay ugu soo dheelay Manchester United oo Kansar ku dhacay
Cudurka Kansarka 'oo ku sii kordhaya caalamka
Waaxda adeegyada dhiigga iyo xubnaha la tallaalo ayaa sheegtay in ay sameyso wax kasta oo karaankeeda ah si ay u xaqiijiso in xubnaha lagu deeqay ay yihiin kuwo ku haboon in dadka lagu tallaalo, balse maadaama ay caadi ahaanba aad u deg deg badantahay howsha kala baddalidda xubnaha, suurta gal ma ahayn in goor horeba lasii baaro qofka xubnaha ku deeqay.
Pauline Hunt, oo 49 jir ah ayaa sidoo kale qaadday cudurka kansarka, ka dib markii lagu tallaalay kalli deeq ah oo ay ka heshay isla qofka beerka ku deeqay, oo ahayd haweeney u dhimatay xanuun la xiriiray xinjiro isku xiray qulqulka dhiigga.
Mr Tyreman walaashiis oo lagu magacaabo Jane Bird ayaa sheegtay in howl wadeennada isbitaalka looga baahanyahay iney aad uga taxadaraan khaladaadka noocaas ah.
"Waxaa na loo sheegay inuu qaadi karo cudurka kansarka, maadaama difaaca jirkiisu uu ahaa mid aad daciif u ah, arrintaasna waan aqbalnay", ayey tiri.
"Balse waligeen nalooma sheegin iney macquul tahay in kansarka uu ka qaadi karo xubintii lagu tallaalay".
"Waxay ila tahay in loo baahanyahay baaritaanno dheeri ah oo xoog leh. Waa wax aan la aqbali karin in maanta oo casri lagu jiro la sameyn waayo baaritaannada muhiimka ah".
Image caption Mr Tyreman walaashiis Jane Bird waxay sheegtay in baaritaanno dheeraad ah loo baahanyahay
Qoyska Mr Tyreman ayaa qeylo dhaantan soo saaray ka dib markii ay Mrs Hunt xaaladdeeda ku qeexday sidii "iney ku xukumantahay dil".
Maamulka isbitaalka Freeman ayaa sheegay in iminka ay socdaan baaritaanno la xiriira arrintan.